Scrubber (1) orylọ ọrụ - China Scrubber (1) Ndị na-emepụta, Ndị na-eweta ngwaahịa
USB / Batrị Escalator Cleaner- SC-450 / D
Atụmatụ Pụrụ iche n'ihu wheel imewe, ọ bụ ihe adaba na-eje ije. Nwere ike ịtọlite ​​akpa uzuzu n'ime, dị mfe ma dị ọcha. Akpaghị aka ịgbanwe elu ala, elu ihicha arụmọrụ! Nka na ụzụ Ihe SC450 SC450D Volta 220-240V / 50Hz 40V Ike 1180W 580W Obosara 450mm 450mm Ọkụ moto 220V / 1000W 500W Roll brush motor 24V / 180W 24V / 180W Roll brush ọsọ 230RPM 230RPM ikike 20L 5L USB 12m - Ibu 38kg 64.5kg Gross ibu 40.2kg 66kg mbukota 950x540x31 ...
AS-2007 Gbaa ịnyịnya-na Scrubber Drier
Gbaa ịnyịnya-na scrubber drier bụ oké mkpa dị mkpa igwe-ihicha igwe, nke bụ na mgbanwe ọrụ, bilateral brushes imewe na elu ihicha arụmọrụ. Ọ metụtara ọchịchị ụlọ saịtị, square, ibu ahịa, ụlọ mmepụta ihe, ogbako na a dịgasị iche iche nke ọha na eze.
Gbaa ịnyịnya-na Scrubber Drier SC1350
Ngwaahịa a bụ igwe dị ezigbo mkpa maka ihicha ala. Ọ dị mfe ịnya ụgbọ ala, na-agbanwe agbanwe iji rụọ ọrụ, otu na efere okpukpu abụọ, ihe nhicha dị elu, arụmọrụ dị ike iji mepụta nsị mmiri synchronously.
O kwesịrị ekwesị maka saịtị iwu obodo, nnukwu ebe, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, wdg.
Na-eje ije-Behind Scrubber Drier na Batrị -H8101 / H8102
Usoro iji scrubber drawer bụ ihe dị mfe. Ndị na-ehicha ụlọ na-eji ihe dị n'ihu iji nye ụlọ gị ihe dị omimi site na iji mmiri na kemịkal. A na-achịkọta mmiri mmiri ruru unyi n'otu igwe dị nro site na akụrụngwa akụrụngwa nke azụ, nke na-abụkarị mpịakọta na mmịpụta nke na-etinye nsị na oke mmiri n'ime ọdụ nchekwa.
Nchekwa onwe Auto Scrubber Drier-SC50
Obere ntancha mmiri- SC2A
Nnukwu arụmọrụ ma dị ọcha, iji gboo mkpa dị iche iche nke gburugburu. N'agbanyeghị ụlọ oriri na ọ theụ ,ụ, ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, halllọ oriri na ọffeeụffeeụ kọfị, sinima, Oge Ntụrụndụ, mgbatị ahụ, ụlọ ọrụ ọfịs. Narrowdị ebe ahụ dị ọcha dị warara na ọdịiche nwere ike iji ya mee ihe kpamkpam, ebe ị na-ehichapụ akpaka nke nsị mmiri, na-arụ ọrụ nhicha zuru oke.